“बलिवुडको मसुर अभिनेता आसिफ बसराले आ’त्मह’त्या गर्यो “ – Krazy NepaL
November 12, 2020 571
बलिवुडले १ सा’लमा निकै कलाकारहरु गुमाई सक्यो त्यसै क्रममा फेरी अर्को १ कलाकारलाइ गुमायको छ हालनै अभिनेता आसिफ बसराले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआइले अभिनेता बसरालाई धर्मशाला मैक्लोडगंजस्थित जोगिबाड़ा रोडको क्याफे नजिक आ’त्मह’त्या गरेको अवस्थामा भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
उनले किन आ’त्मह’त्या गरे’ भन्ने बारेमा भने अझै स्पष्ट नभएको’ भारतीय मिडियाहरुले उ’ल्लेख ग’रेका छन् । प्रहरीको शुरुवाती अनुसन्धानमा बसरा एक विदेशी महिला साथिसँग भाडाको घरमा बस्दै आएको खुलेको छ । प्रहरीले बासराको निधन आ’त्मह’त्याबाटै भएको सुरुवाती अनुसन्धानमा देखिएको बताएको छ ।
५३ ब’र्षिय अभि’नेता बसराले बलि’वुडसहित कैयौं टिभी सिरि’ज र वेभ सिरिजमा अभि’नय गरेका छन्’ । उनले बलिवुडमा हिचकी, जब वि मिट, एक भिले’न काय पोचे, वान्स अपन अ टाइम” इन मुम्बई जस्ता फिल्ममा काम गरेका छन् । त्यस्तै ‘उनले पा’ताल लोक ‘र होस्टेजेज ‘जस्ता चर्चित वेब सिरिजमा काम गरेका थिए ।
Prev“पार्टी विभाजन रोक्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ भन्ने नेकपा सचिवालयका सदस्यले निष्कर्ष निकाले “
Next“यदि तपाइको कुर्कुचा फुटेर है’रान हुनु हुन्छ ?घरेलु यो बिधि अपना’उनुस निको हुन्छ “
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (44016)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23181)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17995)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15881)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13989)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13147)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12387)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12186)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12183)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11784)